Police-ka Puntland oo Beeniyay in ay ka mid yihiin ragii la gawracay (Digniin sawiro) – SBC
Police-ka Puntland oo Beeniyay in ay ka mid yihiin ragii la gawracay (Digniin sawiro)
(Digniin Sawiro meyd ayaa ku jira kuma haboona caruurta & dadka qalbiga jilicsan inay daawadaan) Taliska Boliska Puntland ayaa Beeniyey in ay kamid ahaayeen labo nin oo labisnaa labiska ciidanka boliska Puntland oo la gowracay .
Player-ka hoose ka dhageyso Hadalka Taliyaha Halkan ka dhageyso hadalka Taliyaha
Taliye kuxigeenka Booliska Dawladda Puntlanad Maxamed Siciid Jaqanaf oo galabta shir,jaraa’id kuqabtay magaalada Boosaaso ayaa beeniyey in ragaasi la gowracay ay ka tirsanaayeen ciidanka boliska dawlada Puntland.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ragani ay ahaayeen labo mid kood, in ay ahaayeen dad ka mid ah kuwa deegaanka oo diiday in ay fuliyaan awaamiirta koox uu ku sheegay in ay yihiin al shabaab, ama in ay yihiin dad iyaga kamid ahaa oo kasoo horjeestay fikirkood. wuxuuna sheegay in ragani ay ahaayeen Rag in badan xiranaa islmarkaasina ay kamuuqatay duurf iyo rafaad farabadan .
Hadalka taliska Boliska Puntland ayaa waxa uu imanayaa xili saaka lahelay meeydka laba ruux oo ku labisanaa Dareyska ciidanaka boliska Puntland oo loo geystay fal ah qoor goyn .
Juun 25, 2011 at 7:24 pm
inaa lilaahi wainaa ilihi ra jucuun puntland masdaan baaudan baysay ilahayoow noonaxariso dakii ilahay baay ka fogadeen waxas oodhan waxaa ugu wacan maamulkaan xun ee faroole odagaan nacaskaa ah ee puntalnd xukuma
Juun 26, 2011 at 12:46 am
inaa lilaahi wa inaa ilayhi rajicuun wa arin naxdin badan o fool xun waxaana u sababa mamul xumada faroole wana ka xumahay puntland inay saan noqoto
BASHIR SHEIKH says:
Juun 26, 2011 at 2:53 am
FADLAN HADAYDAA WAX KALE U QABAN KARIN HASAWIRINA QOOFKAAN ISLAAMKA EE MUNAAFIQIINTU SIDAAN UGALEEN WAA DANBI SAWIRKIISA IYO MUUJINTIISA MAYDKA BILAA SABABTA AH
AAKHIRANA WAA LAGU WAYDIINDOONA HADAA AAKHIRO DANKALEEDAHAY
ILAAHOW PUNTLAND BADBAADI
Juun 26, 2011 at 8:09 am
waxaan aad uga xumahay dhacdadaani waana mid kucusub guud ahaanab deegaadna puntland waxayna cadaynutahy inaysan dowlda faroole waxba kaqabankari ammaanka shacabwaynaha ku dhaqan puntland,waa tuu faroole xildhibaanda caayaye wax ha ka dheefo waa kaas dadka guryahooda laguqalayee .